कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाएको कति समयपछि काम गर्न थाल्छ? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाएको कति समयपछि काम गर्न थाल्छ? खोप लगाइयो भन्दैमा ढुक्क भएर हिँड्न मिल्दैन
कमला गुरुङ सोमबार, माघ १९, २०७७, २१:०५:००
काठमाडौं - नेपाल सहित विश्वका विभिन्न देशमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउन थालिएको छ। कोरोनाले त्रसित विश्वका अधिकांश देश र मानिसहरु खोप लगाउन चाहन्छन्।
त्यसैले नेपालमा पनि सरकारले प्राथमिकताका आधारमा चरणगत रुपमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरेको छ। यही माघ १४ गतेदेखि सरकारले कोभिड १९ विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गरी पहिलो चरणको खोप लगाइरहेको छ।
पहिलो संक्रमित भेटिएको एक वर्षपछि नेपालमा खोप लगाउन सुरु भयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो छैठौं दिनमा खोप लगाउनेको संख्या १ लाख १३ हजार १ सय ७५ पुगेको छ।
यो खोप लगाउने बित्तिकै सुरक्षित भइन्छ भन्ने होइन। खोपको मात्रा पूरा गर्नुपर्छ र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पनि पालना गर्नुपर्छ। तब मात्र कोभिड १९ विरुद्धको यो खोपले शरीरलाई सुरक्षा दिन सक्छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुख डा झलक गौतम पूर्ण रुपले सुरक्षित हुन अनिवार्य रुपमा खोपको पहिलो र दोस्रो मात्रा पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन्। खोपको पहिलो मात्राले मात्र पूर्ण रुपमा सुरक्षा दिन नसक्ने उनले बताए।
उनी भन्छन्, ‘खोपको दुई मात्रा पूरा गरेपछि मात्र यसको प्रभावकारिता हुन्छ। पहिलो खोप लिएर मात्र सुरक्षित हुन सकिदैन। दोस्रो मात्रा पनि लगाउनैपर्छ।’
पहिलो खोप लगाएको २८ दिनपछि दोस्रो मात्रा लगाउनुपर्छ। कोभिसिल्ड खोपको हकमा दोस्रो मात्रा पूरा गरेपछि ७० प्रतिशत बढी कोरोनाबाट सुरक्षा दिने उनले बताए।
उनले भने, ‘खोपको दोस्रो मात्रा पूरा नगर्दासम्म जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु छाड्नु हुँदैन। पालना गरिरहनुपर्छ।’
खोपको पूरा मात्रा लगाएको एक महिनापछि शरीरमा न्युट्रोलाइजेन एन्टीबडी बन्ने भाइरोलोजिष्ट डा लुना भट्टले बताइन्। पहिलो खोप लगाएको २८ दिनदेखि धेरैमा ३ महिनाभित्र दोस्रो डोज लगाइसक्नुपर्ने उनले बताइन्।
उनले भनिन्, ‘खोपको दोस्रो मात्रा लगाएको एक महिनापछि मात्र राम्रोसँग एन्टीबडी बन्छ भनेर विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्।’
डा लुनाका अनुसार नेपालमा लगाइएको कोभिसिल्ड खोपले बढीमा ६ महिनासम्म शरीरमा सुरक्षा दिन सक्छ। तर खोप लगाउँदैमा सुरक्षित भइन्छ भन्ने होइन। भाइरसको परिवर्तित स्वरुपका कारण कोभिड विरुद्धको यो खोपले काम गर्ने÷नगर्नेमा उनी विश्वस्त छैनन्। त्यसैले खोप लगाएपछि ढुक्क भएर नबस्न उनको आग्रह छ।
‘नयाँ खालका भेरियन्ट भएर भाइरसहरु आइरहेका छन्। यसले गर्दा अहिले लगाएका खोपले नयाँ भाइरसमा काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा अध्ययन हुन बाँकी छ। त्यसैले खोप लगायो भनेर ढुक्क भएर हिँड्न मिल्दैन,’ उनले भनिन्।
खोप लगाएको ठ्याक्कै कति समयपछि शरीरमा यसले काम गर्न थाल्छ भन्ने यकिन जानकारी अझै आउन बाँकी छ।खोपको कारणले वृद्धि भएको प्रतिरोधात्मक क्षमता कति समयसम्म रहन्छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको डाक्टर गौतम बताउँछन्। ‘खोप लगाएको कति समयपछि शरीरमा यसले काम गर्छ भन्ने कुराको अध्ययन पूरा भइसकेको छैन। नयाँ खोप भएकाले पनि यस विषयमा धेरै जानकारी अहिले नै प्राप्त भइसकेका छैनन्’, उनले भने।
नयाँ भाइरस आइरहेकाले खोप लगाएपनि व्यक्ति पुनः संक्रमित नहोला भन्न नसकिने उनले बताइन्।
खोप लगाएपछि पनि हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरु पनि पालना गर्नुपर्नेमा उनी जोड दिन्छिन्। खोपको पहिलो मात्रा लगाएपछि सामाजिक दूरी कायम गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग, साबुन पानीले हात धुने व्यवहारहरु अवलम्बन गनुपर्ने उनले बताइन्।
खोप लगाएपछि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर बनाउने कुनै पनि किसिमको व्यवहार नगर्न सरुवा रोग विशेषज्ञ डा अनुप बाँस्तोला आग्रह गर्छन्। खोप लगाएपछि मादक पदार्थ र मद्यपान सेवन नगर्न उनी सुझाउँछन्। खोपको दोस्रो मात्रा पूरा गर्न डा बाँस्तोलाको आग्रह छ।
उनले भने, ‘खोप राम्रोसँग राखिएको छ÷छैन, कुनबेला कसरी लगाइएको छ। खोप लगाएपछि शरीरले कस्तो प्रतिक्रिया देखाउँछ भन्ने कुराले पनि फरक पार्छ।’
प्राथमिकताका आधारमा सरकारले विभिन्न लक्षित समूहलाई खोप लगाइरहेको छ। पहिलो चरणमा खोप लगाउनेमा कोभिड विरुद्ध खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स र शव बाहन चालक, सरसफाइकर्मी लगायत छन्।
प्राथमिकताका आधारमा छुट्याइएका चरणमा पर्ने व्यक्तिहरुले सोही समयमा खोप लगाउन डा शर्मा आग्रह गर्छन्। चरणमा छुट्याइएका व्यक्तिहरुले तोकिएको समयमा खोप नलगाए पछि भनिएको समयमा खोप नपाउने उनले बताए।
‘अहिले जसको पालो हो, उनीहरुले खोप लगाउनुपर्छ। अहिले लगाउँदिन पछि लगाउँछु भन्यो भने आम जनताले लगाउने बेलामा मात्र उहाँको पालो आउँछ,’ उनले भने।
कोभिड-१९ विरुद्धको खोप गर्भवती, स्तनपान गराइरहेका, गर्भवती हुने योजना भएका महिलाहरुले लगाउनु हुँदैन। खोपको पहिलो मात्रा लगाउँदा एलर्जी भएकाहरुले दोस्रो मात्रा लिन नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ।